मेरो सपना | मझेरी डट कम
editor — Sat, 07/23/2016 - 16:08
आबुइ नि ! यहाँ विकासको राजनीति हुँदैछ । राजनैतिक विसङ्गति र विकृतिलाई डाँडो कटाइएछ । आहा ! न त यहाँ प्रजातन्त्रलाई बाँदरको हातमा नरिवलजस्तो बनाइएको छ न कृषि प्रधान देशलाई कुर्सीप्रधान बन्न दिइएको छ । परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेहरूलाई राजनीतिमा उत्तीर्ण हुन दिने छैन । नेताको नाम लिँदा नाक खुम्च्याउनु पर्ने छैन । शहिद भइसकेको छोरा फर्केर आउने आसामा बसेकी आमाको टट्याइसकेको आँखा र कुँजिएको गोडामा मलम लागेछ बाबै !
यहाँ त यहीँ माटोबाट उदाएका बुद्धका चर्चा हुँदै विश्वभर फैलिएछ र लुम्बिनीमा बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना भए !
यहाँ त यहीँ माटोबाट उदाएका बुद्धका चर्चा हुँदै विश्वभर फैलिएछ र लुम्बिनीमा बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना भएछ । विश्वभरिका युद्ध पिपासुहरूलाई ल्याएर सोही विश्वविद्यालयको प्रयोगशालामा मानसिक उपचार गरिएछ । शान्तिको सञ्जीवनी पिलाइएछ । विश्ववन्धुत्वको जडीबुटी दिलाइएछ । आनी छोइङ् डोल्मा, पासाङ, झमक जस्ता धेरै छोरी जन्मिसकेका छन् । यहाँ नालापानी र कालापानीबाट बलभद्र र भक्ति थापा मत्र नभई साह्रा नेपालीमा देशभक्तिको भाव जाग्ने छ । वर्षमा एक दिन बन्द कोठामा भित्र पसेर शहिदहरूप्रति ओठेभक्ति देखाउन छाडिएछ । बरु नयाँनयाँ वीर सपुत जन्मन थालेछन् ।
शहिदको खेती गरेर भकारी भर्न छाडेछन् । नेपाली छाराहरूले खाउखाउँ र लाउँलाउँका उमेरमा कान्छा र बहादुर भएर विदेशका जुठ्यानमा हात डुबाउन छाडेरबरु अब त विदेशीहरू कामको खोजीमा नेपाल आउन थालेछन् । विदेशी नरक ग्रहमा नेपाली नारीहरूले नरकीय पीडा भोग्दै जिउँदो लास बन्न छाडेछन् बाबै !
ऋाहा ! आफ्नो चुहिने घर छाडी अर्काको घर ढलन गर्न धाउन छाडेछन् –नेपाली ।बिताको बास र मुठीको गाँस खाएरै भए पनि नेपालीले माटोमा पोख्ने मुटुको माया बेच्ने छैन रे ! देशका छोराछोरी अब विदेश ओइरिन छाडेछन् र हाम्रो घर आँगन भरिभराउ भएछ । कवि, कलाकार, शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरूले मेरो सपनाको नेपालमा सपनाम पनि पीडित, अपमानित र तिरस्कृत बन्नु पर्ने छैन । राष्ट्र दुब्लाउने र राष्ट्रसेवक मोटाउने अवस्था आउने छैन । तर झल्याँस्स सपनाबाट विपनाको दुनियाँमा प्रवेश गर्छ र झसङ्ग हुन्छु । फेरि देश उही पुरानो बन्छ । तर कैले बन्ला मैले सपनामा देखेको जस्तो नेपाल ? त्यो दिन आए कति राम्रो हुन्थ्यो है ??
एमएड, द्वितीय वर्ष, इपिएम समूह,
मन्थली शहिद स्मृति बहुमुखी क्याम्पस
मिथिला मधेशक पावनि छठि
तिम्रो असली रूप
गरुडपूराणले अर्थ्याएको जीवनचक्र
बोले देखी देवहरू
आमैले सोध्लिन् नि खै छोरा भन्लिन्
मन्दिर धाइ मैले देवता पुज्नु सकिन
मन अनौंठो मानिसको,
राजनीति र राजनीतिज्ञ